.: If your BIRTHDAY is .......
If your BIRTHDAY is .......
You are attractive, and active. You never hide your feelings, and express everything that's inside. But can be selfish at times. You want to be noticed, and don't like to be treated unequally. You can brighten up peoples day. You know what to say at the right time, and you haveagood sense of humor.
Your Strength is Your Love towards friends.You always looks to love somebody and u be loved by somebody. Your Intelligence may lead to success in your life
မိမိရဲ့ မွေးနေ့အလိုက် အရောင်များကို ရွေးချယ် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ဘယ်နေ့ထဲမှာ ပါဝင်ပြီး ဘယ်အရောင်အမျိုးအစားလဲဆိုတာ သိနိုင်တာပေါ့။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူး အားလုံး လွယ်လွယ်လေးတွေပဲ ရေးထားလို့ပါ ၀ိုင်းကတော့ အဖြူရောင် အမျိုးအစားထဲကပါတဲ့...
Posted by Waing at 12/10/2009 09:55:00 PM
တားကတော့ ဂရေးပါခင်ညား။ ဘယ်ုလိဘာသာပြန်ရမှန်း မသိလို့ ပြောပြပါခင်ညား။
ဟဲဟဲ မေသူက Grey ကွ...တူတယ်နော်...
ကျွန်တော်ကတော့ blue ပါတဲ့ ဗျာ . . . :)
December 11, 2009 at 12:11 AM
ကျွန်တော်က မီးခိုးရောင်ပဲ။ အမှန်လဲ အဲဒီအရောင်ကို နှစ်သက်တယ်။
ကျွန်မက တော့ Aqua ပါမှန်တယ် သူများကို လွယ်၂ ယုံတတ်တယ် :) ကိုယ့်လိုပဲမှတ်လို့ပါ ဟီး၂
ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းနဲ့ အကုန်လုံးမှန်နေတယ်
ငယ်ငယ်တုန်းကနှစ်သက်ခဲ့တဲ့အရောင်လေးပဲ pink တဲ့း))နည်းနည်းတော့ မှန်သလိုလိုပဲး))
I am Maroon. Very right..
တို့က cream တဲ့